Faah Faahin: 3 Askari Kenyaan Ah Oo Lagu Dilay Weerar Ka Dhacay Deegaan Hoos Taga Degmada Mandheera.
Thursday August 03, 2017 - 12:08:23 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Kenya ayaa sheegaya in markale weerar khasaara badan dhaliyay lagu qaaday mid kamida saldhigyada ciidamada Booliska ee duleedka Mandheera.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab qeybta ka dagaalanta gudaha dalka Kenya ayaa xalay saqdii dhexe weerar culus ku qaaday deegaan dhaca duleedka magaalada Mandheere oo ka mid ah dhulka Soomaalida NFD ee Kenya gumeysato.
Sida lagu xaqiijiyay war rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada SHM weerar xooggan ayaa lagu qaaday laba saldhig oo ciidanka Booliska Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Lafeey oo kamid ah deegaannada hoostaga magaalada Mandheera.
Iska Hor'imaad muddo kooban socday kadib ayay ciidamada Muslimiinta ugu suurtagashay in ay la wareegaan laba saldhig oo ciidamada Booliska ku sugnaayeen, Al Shabaab waxay sheegtay in 8 gaari ay ka gubtay ciidamada Kenya islamarkaana ay qateen gaari nuuca dagaalka ah "Mujaahidiintu waxay la wareegeen laba saldhig oo Ciidamada Booliska Kenya uga sugnaayeen deegaanka Lafeey waxayna gubeen 8 gaari halka hal gaari ay ghaniimeysteen" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Xarakada SHM.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Meydadka sedax askari oo booliska katirsan lagu arkay deegaanka Lafeey, sidoo kale xoogaga Al Shabaab ee weerarka qaaday ayaa sii daayay tobaneeyo Maxaabiis ah oo ku xirnaa saldhigyada booliska deegaanka Lafeey.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta maxalliga ah u xaqiijiyay in muddo saacada ah Xoogaga Al Shabaab ay maamulayeen deegaanka kadib markii ciidamada Kenya iyo maamulkii deegaanka ay ufirxadeen dhanka degmada Mandheera ee dhacda xuduud beenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya.
Weerarkan ayaa imaanaya xilli maalmo kooban ay ka harsanyihiin doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa Baarlamaaniga Kenya waxaana laga cabsi qabaa in rabshado ay hareeyaan doorashooyinkaasi sida ay digniin kusoo saareen saraakiisha ammaanka wadankaasi.